Sharciga degenaanshaha cunugga ama waalidka - InfoFinland
U soo guurista Finland > Aan aheyn muwaadin EU > Xubin qoys oo Finland joogta > Sharciga degenaanshaha cunugga ama waalidka
Caruurta dhalashada finniska haysta
Ilmihu wuu heli karaa sharci degenaansho middeynta qoyska ah, haddii waalidku yahay muwaadin finnish ama ay is qabaan muwadin finnish ah isla markaana ku nool Finland. Ilmuhuna waa inuu yahay mid ka yar 18-jir aanan laheyn xaas marka oggolaanshaha joogitaanka la codsanayo.
Ilmaha waalidkood, ee degan Finland, waa iney yihiin masuulka ilmaha, si ilmahaas loo siiyo sharci degenaansho. Haddii labada waalidba yihiin kuwa ka masuulka ilmaha, waa in labada waalid midka kale ogol yahay, in ilamihii u guuri karo Finland. Waana in ogolaanshahaas laga soo caddeyaa notaariyada si loo xaqiijiyo heshiiskaas.
Xiriirka waalidnimo ee ilmaha iyo waalidkana waa in la caddeyaa, tusaale caddeynta warqada dhalashada, ooy ku qoran tahay magaca waalidka.
Waalidka ayaa u sameynaya carruurta codsiga. Sidoo kalena waa in ilmuhuna yihiin goobjoog, marka codsiga la xareynayo.
Caruurta waalidiintoodu ajnabiga yihiin
Ilmihu wuu heli karaa sharci degenaansho middeynta qoyska ah, haddii waalidku yahay mid heysta sharci degenaansho waalidkuna ku nool yahay Finland. Ilmuhuna waa inuu yahay mid ka yar 18-jir aanan laheyn xaas marka oggolaanshaha joogitaanka la codsanayo.
Sidoo kale ilmaha ku dhasha Finland, wuxuu u baahan yahay sharci degenaansho, sharcigana waa in loo dalbaa saddex billood gudahood laga soo bilaabo waqtiguu dhashey.
Ilmaha waalidkood ku nool yahay Finland, waa iney ka msuul yihiin ilmaha, si uu ilmihii u helo sharciga degenaanshaha, haddii labada waalidba ay yihiin kuwa ka masuulka ah ilmaha, waa in labada waalid midka kale ogol yahay, in ilamihii u guuri karo Finland. Waana in ogolaanshahaas laga soo caddeyaa notaariyada si loo xaqiijiyo heshiiskaas.
Si ilmihii sharci u helo waa iney caymisan tahay noloshii ilmaha uu ku noolaan lahaa Finland, tusaale in waalidkii qaato mushaar masruufayaana ilmihii.
Si kastaba ah ahaatee waalidka loogama baahna shuruuda ah dakhli ku filan, hadii ilmuhu uu dhshay kahor intii aan waalidku imaan Finland, waalidkuna uu Finland ku haysto sharciga qaxootinimada. Hadii waalidku uu helay sharciga qaxootinimada 1.7.2016 ama ka bacdi, waxaa waajib ah in la sameeyo codsiga sharciga daganaanshada ee cuniga sadex bilood gudahood laga bilaabo markii uu helay sharciga qaxootinimada. Codsiga waa sameyn kartaa waqtigaas kabacdi, laakiin markaas waxaa loo bahanyahay shuruuda ah dakhli kufilan nolosha inaad haysato.
Hadii waalidku uu sharciga daganaanshada ku helay statuska ah baahida xafidaada caalamiga ah, laakiinse aan loo aqoonsan qaxootinimo, waxaa markaas waxaa waalidka looga baahanyahay shuruuda ah dakhli nololeed ku filan iinuu haysato, si uu ilmuhu u helo sharciga daganaanshada.
Waalidka ama qofka kale oo ilmaha masuul ka ah
Waad ku heli kartaa sharci degenaansho, haddii ilmahaagu ku nool yihiin Finland. Haddii ilmaahu aheyn muwaadin finnish ah, waa inuu ku leeyahay wadan shrci degenaansho ah Finland. Ilamhaaganu waa iney da’doodu ka yar tahay 18-jir aanan laheyn xaas marka oggolaanshaha joogitaanka la codsanayo.
Si aad u hesho sharci degenaansho waa inaad tahay masuulka ilmahaas. Inta badan masuulku waa hooyada iyo aabaha dhaley ilmaha. Masuulkuna mararka qaar wuu ahaan karaa ruux kale tusaale awoowe/ayeeyo.
Xiriirka waalidnimo ee ilmaha iyo waalidkana waa in la caddeyaa, tusaale caddeynta warqada dhalashada, ooy ku qoran tahay magaca waalidka. Haddii masuulka codsanaya sharciga degenaanshaha uusan aheyn aabaha ama hooyada ilmaha. Waa in la caddeyaa masuuliyada laguna caddeyaa tusaale caddeynta go’aanka maxkamadda.
Si aad u hesho sharciga degenaansha waa inaad heystaa hanti kuugu filan ood ku noolato.
Si kastaba ha ahaatee adiga lagaagama baahna hanti kugu filan, hadii ilmuhu uu haysto dhalashada finnishka. Sidoo kale hanti kugufilan lagaagama baahna hadii aad ilmaha mauul ka ahayd kahor inta uusan ilmuhu Filand imaanin, ilmuhuna uu Finland ku leeyhay sharciga qaxootinimada. Hadii ilmuhu uu helay sharciga qaxootinimada 1.7.2016 ama ka bacdi, waa inaad sameysaa codsigaaga sharciga daganaanshada sadex bilood gudahood laga bilaabo markii uu ilmuhu helaFinland ka helay sharciga qaxootinimada. Codsiga waad sameyn kartaa waqtigaas kabacdi, laakiin markaas waxaa loo bahanyahay shuruuda ah dakhli kufilan nolosha.
Waa inaad soo codsataa sharciga ugu horeeya intaadan imaan Finland. Waa inaad soo codsataa sharciga ugu horeeya intaadan imaan Finland. Shaciga ka soo codso wadankaaga ama wadanka kale oo aad markaas sida sharciga ah ugu nooshahay. Sharciga ugu horeeya waxaad sidoo kale ka dalban kartaa Finland dhexdeeda, haddii xubin qoyskaaga yahay muwaadin finnish ah adiguna aad tahay muwaadin u dhashay wadan aan fiiso looga baahnayn, tan macneheedu waa inaadan fiiso u baahnayn markii aad Finland imaaneysid.
Codeysiga waad ka sameysan kartaa internetka adigoo isticmaalaya bogga adeegga internetka ee Enter Finland. Markii aad sameysid codsiga waa inaad u tagtaa safaarada Finland ee kuugu dhow ama barta adeegga ee Xaafiiska dal u soo guurista, si aad u caddeyso ama aad u geyso aqoonsigaaga iyo codsiga warqaaha asli ahaantooda. Waa inaad safaarada ku tagto sadex bilood gudohoon laga bilaabo taariikhdii aad codsiga internetka ka xaraysay. Xal ka gaarista sharcigaaga waxaa la bilaabayaa kadib, markaad u tagto safaarada ama barta adeegga. Caadi ahaan waa inaad safaarada ama barta adeegga horay waqti uga sii qabsato.
Xusuusnow inaad si joogto ah u fiiriso akoonkaaga Enter Finland. Haddii codsigaaga xal ka gaaristiisa awgeed lagaaga baahdo faah faahin dheeraad ah, akhbaarta waxaa laguugu soo dirayaa akoonkaaga.
Markii ugu dambeysay ee waqtiga lala simay: 24.02.2020 Boggan war-celin ka soo dir